Posted by Liban Mukhtar Avobankz on April 30, 2008
Gabaygan wuxuu ka mid yahay gabayada ugu caansan gabayada Cilmi Boodhari. Gabaygan wuxuu marka hore Cilmi ugu jawaabayaa dadkii Cilmi caashaqa kula yaabsanaa. Wuxuuna u sheegayaa caashaqu in aanu layaab lahayn ee yahay wax caadi ah oo Ilaahay aadmiga ku abuuray weligiina uu soo jirey. Dadkana waxa lab iyo dhedig looga dhigay inay is cajebiyaan. Marka xigtana wuxuu dadkan la yaabsan ku lahaa muu gabadhan yar iska ilaawo oo mid kale meelahaa u doonto, in aanay arintu sidaa u sahlaneyn. Wuxuuna u sheegayaa in aanu iska saari karayn caashaqan ku habsadey Ilaahay oo ka saara mooyeene. Waxuu leeyahay wax kastana sameeyey oo wax aan ku bugsado oo iga saara ma hayo, xataa wadaadadii ayaa iga saari kari waayey. Cilmi wuxuu leeyahay waxa keliya ee dawada ii ahi waa anigoo Hodan hela, xaalka aan maanta ku jirona waxaa ka roon anigoo dhinta.
WAA KAN GABAYGII CAASHAQ
Caruurtay sideen meesha iyo Ciise nebigiiye
Cidla lagama beermeen dadkoo cuudi waaxidahe
Waxa caynba cayn looga dhigay hays cajebiyeene
Soomaalidaa caado xune iguma caydeene
Kuwii ii calaacalayeybaan camal tusaalayne
Curuuqdiyo maxaa kala dhex geli cadaha hoostooda
Ma cidaamkanaan jebinayaa cunaya dhuuxooda
Inaanse cadaydo mooyee waxaan calaalsho lay diidye
Caqliga yaa ka bi’in tuu Ilaah ku circadaayeeyey
Cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobaayey
Muga inaan cadaadaabaan ka biqi Canab daraadeede
Cududuhu ma naaxaan haddaan caafimaad jirine
Casharkay wadaaddadu qoreen cudurkan goyn waaye
Cilmi iyo daawoba doontay oo waayay cilinkiiye
Inaan kaa calool go’ay naftay caymisoo ogiye
Jeeraan Canabeey ku helo caafimaad dhimaye
Ilayn caashaq lama maydhi karo kugu cirrooloobay.
Cilmi Ismaaciil wuxuu gabaygan kaga cabanayaa dhalinyaradii ay isku beesha ahaayeen. Cilmi wuxuu u sheegayaa nimankaas in xaalkiisu uu aad u xun yahay, habeeniyo iyo maalina uu feker iyo walaac ku jiro. Wuxuu isku metelayaa sidii qaalin (neef geel ah oo yar) oo uu cudurka dhugatada la yidhaahdaa ku dhacay oo geelii gaadhi waayey xanuun dartii oo iska daba luudaya. Wuxuu leeyahay cidna ma raaco oo cidladaan keligey wareegaaleysanayaa halkii aad ii arxami lahaydeen ee aad wuxuun igula daali lahaydeen ayaabad igu cayaarayesaan oo iga riwaayadeysanaysaan ,,,,,,,,,,,,
WAA KAN GABAYGII (DHADHAB)
cajaayib!Nimanyahow dharaar iyo habeen waan dhadhabayaaye
Dhulkuun baan xarriiqaa siday dhiillo ii timide
Sida qaalin dhugatoobayoo geelii wada dhaafay
Dhallinyaro ma raacee kalaan dhaxanta meeraaye
Dhaqtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac wayn qaba e
Iyana waygu dheeldheelayaan dhamacda Daa’uude
Gabaygan waa gabay fariin ah oo Cilmi u dhiibay nin ay ilmo adeer ahaayeen u socday magaalada Berbera oo ay joogtay gabadhii uu jeclaa Hodon Cabdi Walanwal. Cilmi waqtigaas wuxuu joogaty miyiga iyo Hawd. Wuxuu gabayga ku bilaabayaa duco uu ninka fariinta qaadaya u ducaynayo dabeedna wuxuu muujinayaa sida aanu habaynkii u seexan ee uu weli Hodan xageeda usoo hanqal taagayo. Wuxuu leeyhay waxaad ku tidhaahdaa hadaad is leedahay Cilmi wuu ku ilaawey ama wuu kaa hadhay, in arainku aanu caynkaas ahayn gabadh kale oon la shakeekaystaana ay iga reebban tahay. Ugu danbayntii wuxuu odhanayaa haddii aan caano geel kuugu sii dhiibi lahaa oo hadiyad aahaan ugu diri lahaa, kulaylkaa leefaya oo intaad jidka kusii jirtaabay xumaanayaan ee talow maxaan inantii Hodan kuugu dhiibaa?
WAA KAN GABAYGII (HILAAC)
Wuxuu yidhi:Ina adeer hagaagtaye hadaad hilinka sii qaado
Hantaq iyo Illaah kuguma rido hagabyadii Shiikhe
Mid hubsiimo badan baad tahoo halo la siiyaaye
Adigaan halyay kuu gartiyo huritii Daa’uude
Hilaac baa Berbera iiga baxay Hodan agteediiye
Hurdadana habeenkii ma lado had iyo waagiiye
Sida hoorimaad baa qalbigu ii hanqanayaaye
Waxaa lay horjoogaa sidii horadhacii geele
Inaan haybsigeed dhigay haday Hodan i moodayso
Gabadh kalaan haasaawiyaa wayga haniyaade
Hadaan hadiyad caano ugu diro hoohigaa gubiye
Maxaan kula hagaagaa yartii way hanwayntahaye
Gabaygan waxaa la sheegay in Cilmi tiriyey ka dib markii gabdho aad iyo aad uga damqaday dhibka Cilmi haysta iyo sida maalinba maalinta ka danabaysa ay dhibaatadu ugu sii waynaanayso Hodanna ay adag tahay siduu u helaa, ayaa waxay u yeedheen Cilmi waxayna u sheegeen inay jecel yihiin inay wax la qabtaan. Balse nasiib daro meel qalad ah ayey doonayeen inay wax ka qabtaan iyagoo Cilmi u sheegay in gabadh allaale gabadhii kale ee uu doonayo ay u keeni doonaan. Nin meeli u cadahay meeli ka madowe Cilmi mid ayuunbaa laabtiisa degtey, laabina laba u la’. Markaa Cilmi gabdhihii tixdan yar ee gaaban ayuu ugu jawaabay. Wuxuu yidhi:
WAA KAN GABAYGII (LAACDAN)
Luqun madoobe awrkuba kolkuu laacdan baranaayo
Isagaa u laakima badnaa laqanka xoolaaye
Hadba qaalmo laacdana wuxuu luqun jibaadhaaba
Lix intaanu jirin hadduu laacib ku ahaado
Lama loodin karo jeeray liicdo bowdaduye
Anna laabta kama gooynin caashaqii ladane
Luxudkaan la gelayaa sidaa igaga liil dheere
somali wedding culture →